Isi nke Industrylọ Ọrụ amblinggba Chaa Chaa Canada, Trekpụrụ ndị na-adịbeghị anya na Statistics - 429jp.info
You maara na ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa nke Canada bụ ihe na-enye aka na akụ na ụba mba ahụ? Akụkụ buru ibu nke ego ịgba chaa chaa nke ụlọ ọrụ na-akwado atụmatụ gọọmentị dị iche iche. Mgbe ị na-agba chaa chaa na Canada, akụkụ nke dollar ọ bụla ị na-emefu na-eweta ọha mmadụ ka mma. Nọgide na-agụ ntuziaka a, ị ga-amụtakwu ọtụtụ ihe gbasara ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa nke Canada, dịka usoro ya, iwu, ọnụ ọgụgụ igwe mmadụ, na ndị ọzọ.
Iwu amblinggba chaa chaa na Canada
Iwu nke ịgba chaa chaa na Canada dịgasị iche site n’otu ógbè gaa n’ọzọ. Mpaghara ọ bụla nke 10 nke Canada na mpaghara 3 nwere ọrụ maka ịhazi ọrụ ịgba chaa chaa na ala ha. Ọtụtụ ụdị ịgba chaa chaa bụ ihe iwu kwadoro na Canada, dịka igwe oghere, ịgba ọsọ ịgba ọsọ, ebe egwuregwu lọtrị vidiyo, lọtrị tiketi, ụlọ nzukọ bingo, na casinos azụmahịa.
Ggba chaa chaa n’ịntanetị n’ịntanetị na Canada?
Iwu ndị Canada anaghị egbochi ịgba chaa chaa n’ịntanetị, mana mpaghara ụfọdụ chọrọ ka enwetara ikike ịnweta ebe ịntanetị iji jigide ọnọdụ iwu. Enwere ọtụtụ casinos n’ịntanetị nke iwu nwere ike ịnweta site na Canada, gụnyere CasinoChan. Anyị bụ otu n’ime ebe ntanetị n’ịntanetị kachasị na Canada, na-enye ọtụtụ puku egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ na ọtụtụ ohere iji merie nnukwu.
Kedu oge ịgba chaa chaa na Canada?
N’ọtụtụ Canada, ị nwere ike ịmalite ịgba chaa chaa mgbe ị dị afọ iri na itoolu. Ewezuga bụ Alberta, Manitoba, na Quebec, nke opekata mpe bụ 18.
Tredị dị ugbu a na ụlọ ọrụ cha cha nke Canada
Mmetụta akụ na ụba na-adịgide adịgide nke COVID-19 na-eme ka ọ bụrụ aghụghọ iji nyochaa usoro dị ugbu a nke ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa nke Canada. Agbanyeghị, anyị nwere ike ilele data sitere na ọtụtụ afọ gara aga iji hụ ebe ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa Canada na-aga. O yikarịrị ka ọnọdụ ndị a ọ ga-amaliteghachi ozugbo e nyere oge akụ na ụba oge iji gbakee.
Dabere na nyocha nke Aruvian Research 2018 mere, ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa nke Canada na-enwe mgbanwe site na ịgba chaa chaa nke ala na ọrụ ịntanetị. Site na 2012 rue 2018, mpaghara ịgba chaa chaa nke Canada enweela oke uto, mana ọ dị ntakịrị ntakịrị n’oge afọ ole na ole gara aga nke ọmụmụ ihe. Nnyocha ọzọ sitere n’aka IBIS World gosiri na ịgba chaa chaa cha cha, igwe e-ịgba chaa chaa, ịnyịnya, bingo na ọrụ ịgba chaa chaa ndị ọzọ na-eme ihe ruru ijeri CAD 15 kwa afọ, yana uto uto nke ihe dịka 0.4%.
A tụrụ uto ahụ n’agbata afọ 2013 na 2018. ijeri CAD 9 nke ego a na-enweta kwa afọ na-agba chaa chaa na-aga gọọmentị Canada ma jiri ya maka mmemme ebere na mmemme obodo. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na-akwado ihe karịrị ọrụ 135,000 oge Canada! Ọ bụ akụkụ kasịnụ nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ Canada.
Ontario na-enweta ego ịgba chaa chaa kachasị na Canada, yana oke ego ịgba chaa chaa (GGR) nke 28.1%. Quebec na-esochi ya na 20.3%. Dabere na akụkọ sitere na CDC Gaming, tupu COVID-19, Ontario ga-enwe mmụba 12% kwa afọ (YoY), ebe YoY nke Quebec nọ na 2.12%.
Ọnụ ọgụgụ amblinggba chaa chaa Canada
Ngụkọta nke 60% nke ndị bi na Canada na-ekere òkè n’ụdị ịgba chaa chaa ụfọdụ, na ịkụ nzọ na tiketi lọtrị bụ ọrụ kachasị ewu ewu. 65% nke ndị ịgba chaa chaa nke Canada na-agba nzọ na tiketi lọtrị. Ọrụ ịgba chaa chaa nke abụọ kachasị ewu ewu bụ ịzụta tiketi mmeri ozugbo, na-anọdụ ala na 35%. 22% nke ndị na-agba chaa chaa nke Canada na-eleta casinos dị na ala, na 49% nke ndị ahụ na-egwu egwuregwu mgbe niile. Ndị bi na Quebec nwere ike ịgba chaa chaa (69% na-eme), ebe ndị bi na Manitoba dịkarịa ala (naanị 50% na-eme).
Ihe ka ọtụtụ ná ndị na-agba chaa chaa nke Canada na-ada n’agbata afọ 35 – 50. Ndị na-agba chaa chaa bụ ndị na-egwu egwu egwuregwu ugboro ugboro bụ ndị 55-64 afọ. Ndị Canada na-erubeghị afọ iri atọ na ise nwere ike itinye aka n’ụdị ịgba chaa chaa ọ bụla.
Nkezi afọ ndụ ha na nkesa ọrụ ịgba chaa chaa na Canada. Lọtrị na ọkọlọtọ ga-ewere ọnọdụ dị elu, na-esochi ọrụ ebere ruffles na casinos.
Ego ole ka i chere na onye Canada na-agba chaa chaa na-emefu n’ịgba chaa chaa? $ 100? $ 200? Dabere na otu nnukwu ụlọ ọrụ nyocha ahịa ụwa, Ipsos, naanị 2% – 6% nke ndị Canada na-etinye ihe karịrị $ 100 / ọnwa na ọrụ ịgba chaa chaa. Dabere na data Ipsos, nkezi ndị Canada na-eji $ 6.75 eme ihe n’ịgba chaa chaa n’otu ọnwa. Ego a na-adịgide na mpaghara Canada niile.
Na Canada, ụmụ nwoke nwere ike ịgba chaa chaa karịa 6% karịa ụmụ nwanyị, ha nwekwara 8% karịa ka ha na-emefu ihe karịrị $ 20 kwa ọnwa na ọrụ ịgba chaa chaa.
Mgbe ị na-atụle ọkwa ego ụlọ, ndị Canada na-erughị $ 25,000 kwa afọ nwere ike ịgba chaa chaa. 45% nke ndị Canada na-eweta $ 55,000 + kwa afọ na-emefu $ 1- $ 20 na ezigbo ego ịgba chaa chaa kwa ọnwa.
Gba chaa chaa site na Province
Dị ka e kwuru na mbụ, ịgba chaa chaa ndị Canada dịgasị iche n’agbata ógbè. Ka anyị lebakwuo anya na ọrụ ịgba chaa chaa na mpaghara ọ bụla nke Canada.
Ontario nwere casinos dị na 25. Offọdụ n’ime ha bụ ọrụ ebere, ebe ndị gọọmentị na-edu, ebe ndị ọzọ bụ ụlọ ọrụ nwe ụlọ. Enwere ike ịchọta igwe oghere na casinos na ịgba ọsọ. Ontario nwere ọtụtụ oghere karịa mpaghara ndị Canada ọ bụla. O nwekwara otu n’ime netwọkụ lọtrị kachasị elu na ọdịnaya niile.
Leta a bụ ụdị ịgba chaa chaa kacha ochie na Quebec. Enwere ọtụtụ egwuregwu lọtrị dị na mpaghara a, na eserese na-ewere ọnọdụ kwa ụbọchị. N’oge ahụ, ndị bi na Quebec nwere ike igwu egwu na cha cha ọ bụla n’ịntanetị. Agbanyeghị, nke a ga-agbanwe, dịka gọọmentị mpaghara ahụ kwuputara na ha ga-egbochi saịtị ịgba chaa chaa ọ bụla nke Loto-Quebec na-enyeghị ikike.
E nwere ụlọ casinos itoolu dị na Quebec, ndị bi na New York, New Hampshire, Vermont, na Maine na-eleta ọtụtụ n’ime ha.
Enwere ụlọ anụ ahụ abụọ dị na Nova Scotia. Nke a nwere ike ọ gaghị eyi ka ọ dị ọtụtụ, mana mpaghara a pere mpe. 87% nke ndị okenye nọ na Nova Scotia na-egwu egwuregwu nke oge ọbụlagodi otu ugboro n’afọ. Ndị bi na Nova Scotia nwere ike igwu egwu na cha cha cha cha ọ bụla.
Enwere otu cha cha na New Brunswick. Agbanyeghị, enwere ebe karịrị 900 ebe ndị bi na ha nwere ike ịzụta tiketi lọtrị na mpaghara ahụ niile, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ vidiyo vidio 2,000.
Manitoba mepụtara cha cha chara chaa nke onwe ya, PlayNow Manitoba, na 2013. Ndị bi na mpaghara a nwere ike igwu egwu karịa na weebụsaịtị 1,000 na-enweghị akwụkwọ ikike, mana PlayNow Manitoba bụ naanị onye na-arụ ọrụ n’ime mpaghara mpaghara.
Naanị ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa zuru oke nke iwu kwadoro na British Columbia bụ PlayNow, nke Manitoba nwetara n’ike mmụọ nsọ. Emepere ebe a n’ịntanetị na 2004. Ọ na-enye ndị ịgba chaa chaa egwuregwu ịkụ nzọ, bingo, poker, lọtrị, na egwuregwu egwuregwu cha cha. Enwekwara casinos karịa ala 15 dị na British Columbia, nke kachasị n’ime Vancouver. Hard Rock Casino Vancouver nwere igwe oghere 1,000, ime ụlọ egomegwu, egwuregwu iri asaa na asaa na tebụl baccarat 8.
Agwaetiti Prince Edward
Mpaghara kacha nta na Canada nwere naanị cha cha chara acha, nke jikọtara egwuregwu egwuregwu cha cha na ịgba ọsọ ịnyịnya. A na-achịkwaghị chaa chaa na mba ndị dị na Prince Edward Island ugbu a.
A naghị anabata ụlọ ịgba chaa chaa na ala na mpaghara a, mana ihe karịrị 1,000 weebụsaịtị na-anabata ịgba chaa chaa na ebe a. Otú ọ dị, e nwere otu usoro ịgba ịnyịnya iwu kwadoro dị na Newfoundland.
Enwere ụlọ ịgba chaa chaa isii, 4,000 vidiyo lọtrị vidio, yana usoro ịgba ịnyịnya ịgba iwu atọ dị na Saskatchewan. A na-ahapụkwa ịkụ nzọ na hockey, bọọlụ, bọl, baseball na basketball.
Ihe karịrị 4% nke mmefu ego Alberta sitere na ego ịgba chaa chaa, nke dị elu karịa mpaghara ndị ọzọ dị na Canada. E nwere ihe dị ka casinos 25 dị na mpaghara a, ọtụtụ n’ime ha na-ahụta ka ọrụ ebere. Nke a pụtara na cha cha na-ekewa uru n’etiti ndị ọrụ ebere mpaghara dị iche iche.
Ebee Ka You Pụrụ ịgba chaa chaa na Canada?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba chaa chaa na ụlọ ịgba chaa chaa na ala, Ontario ma ọ bụ Alberta ga-abụ ụzọ kacha mma. Mpaghara abụọ ahụ nwere casinos 25 ọ bụla! Anyị agaghị atụ aro ịnwa ịgba chaa chaa na Newfoundland na Labrador, ebe ọ bụ na mpaghara ndị ahụ enweghị casinos ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ịgba chaa chaa n’ịntanetị na Canada, bia lelee CasinoChan! Ma ịchọrọ igwu egwu oghere n’ịntanetị, blackjack, roulette, ma ọ bụ ihe ọzọ, anyị ekpuchiwo gị. Yabụ, gịnị ka ị na-eche? Mepụta akaụntụ na cha cha kacha mma n’ịntanetị na Canada taa!
Moley Moolah Slot 🎰 nke Yggdrasil🔥RTP 95.74%
Mụta Ndụmọdụ Kachasị Mma Maka NFL ịkụ nzọ n’Onlinentanet
Beting On Rugby Online Dị Mfe
Gịnị Bụ 3D oghere igwe na Gịnị mere ha ji na-ewu ewu